Ny lahatsoratr'i Jeremy Williams momba ny Martech Zone |
Lahatsoratra nosoratan'i Jeremy Williams
Jeremy no VP Marketing sy Serasera ao Media amin'ny kintana 12 ary Candidio. Izy ireo dia samy manome serivisy horonantsary ary sehatra fanovana serivisy ho an'ny horonan-tsary.
Alatsinainy, Novambra 9, 2015 Zoma 13 Novambra 2015 Jeremy Williams
Vao tsy ela aho no nahita ny tatitra momba ny State of Video 2015 avy any Crayon, tranonkala iray milaza fa io dia manana tahiry famolavolana marketing feno amin'ny Internet. Ny tatitra momba ny fikarohana 50 pejy dia niompana indrindra tamin'ny fihenan'ny antsipirihany izay ampiasain'ny orinasa horonantsary, na nampiasa sehatra fampiantranoana maimaimpoana toa Youtube na sehatra voaloa tahaka ny Wistia na Vimeo, ary ireo indostria iza no tena mety mampiasa horonan-tsary. Na dia mahaliana aza izany, ny ampahany mahaliana indrindra an'ny